အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏ ၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံ (၃၃) နှစ်မြေ… – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏ ၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံ (၃၃) နှစ်မြေ…
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ၏ ၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံ (၃၃) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်မိန့်ခွန်း
Like – 21K Share – 2616
ႏွင္းဆီ နီ says:
2021-08-08 at 9:15 AM
မဂၤလာပါ က်မၼာပါေစ သမၼတႀကီး ေလးစားပါတယ္ ယံုၾကည္ပါတယ္ NUG. ျပည္သူ႔အစိုးရ. အေရးေတာ္ပံုမုတ္ခ်ေအာင္ရမည္ 💪💪💪
2021-08-08 at 9:18 AM
NUG is our goverment.
2021-08-08 at 9:23 AM
Thank you very much. We support and stand with National Unity Government (NUG)
2021-08-08 at 9:51 AM
၈၈ မအောင်မြင်ခဲ့တာ ခေါင်းဆောင်တွေက လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးလမ်းရွေးမိလို့ပဲ
ကျောင်းသားထဲမှာတောင် တစုပဲ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို လုပ်ခဲ့တယ်
ကျန် နှစ်စုက မြေအောက်နိုင်ငံရေး (ဗကသ )နဲ့ မြေပေါ်နိုင်ငံရေး (လူ့ဘောင်သစ်ပါတီ) ကို လုပ်တယ်။
ပြည်သူလူထုက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို အားမပေးခဲ့ဘူး။ မထောက်ပံ့ခဲ့ဘူး
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ ABSDF ဟာ လက်နက်မရပဲ အင်အားတွေ တဖြည်းဖြည်း လျော့သွားပြီး အိမ်ပြန်လာသူနဲ့ တတိယနိုင်ငံထွက်သူတွေ ဖြစ်သွားတယ်
​အိမ်ပြန်သူတွေကို ခင်ညွန့်က တနှစ်လောက် လွှတ်ထားပြီးနောက် တဖြည်းဖြည်း ဖမ်းဆီးထောင်ချပစ်တယ်..ထောင်ကထွက်လည်း စီးပွါးရေး လုပ်မရအောင် နှောက်ယှက်ခြိမ်းခြောက်တယ်။
မြေပေါ်နိုင်ငံရေး (ဝါ ) လွှတ်တော်နိုင်ငံရေး ရွေးတဲ့ လူ့ဘောင်သစ်ဟာ မတရားအသင်းကြေညာခံရပြီး မြေအောက်လှျိုးသွားတယ်
တပ်ဦးပါတီ ဖြစ်တဲ့ NLD ဟာ နဝတ နအဖ နဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ် လုပ်ဖို့ အနောက်အုပ်စုက တိုက်တွန်းတာကို လက်ခံပြီး လမ်းမှားလျှောက်မိတယ်။
စစ်တပ် လော်ဘီတွေ ပြောတဲ့ စစ်တပ် ပေးထားချက် ဆိုတာအောက်မှာ ရသမျှ ယူပြီး နှစ်တထောင် ရင်ကြားစေ့ရေး လမ်းစဉ်အောက် အကြိမ်ကြိမ် အလိမ်ခံရတယ်
နောက်ဆုံး စစ်တပ်ရေးတဲ့ ၂၀၀၈ ခြေဥအောက်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ဒူးထောက်အညံ့ခံခဲ့ပေမယ့် မအလ သမ္မတရူးတာတချက်နဲ့ အကုန် ကန်ထုတ်ခံရတယ်
ဒေါ်စုဟာ အတွင်းအပြင် အကုန်လုံးရိုးသားခဲ့တော့ မအလအာဏာသိမ်းတော့ ငုပ်တုပ်မေ့ပြီး ဘာမှ ကြိုတင်မစီစဉ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ CRPH ဆိုတာ ကတိုက်ကရိုက်ထလုပ်ရတာ။ ဘာ ပလန် (ဘီ) မှ မရှိခဲ့ဘူး။ ကံကောင်းတာက CRPH အဖမ်းမခံရပဲ NUG အထိ ခရီးရောက်ခဲ့တာပဲ
နေဝင်းမောင်၊ ကျော်ဝင်း၊ မောင်စူးစမ်းတို့ လို စစ်တပ်ကိ​ု ချော့မြူရေး လော်ဘီ စာရင်းမှာ ပါတဲ့လူတိုင်း စစ်တပ်ကို အီဗော်လူးရှင်းနည်း နဲ့ စစ်တန်းလျားပြန်အောင် လုပ်ရမယ်လို့ လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပေါ့။ စစ်တပ်က ဆုတ်စစ်ဆင်နေတာလို့ လော်နေသူတွေပေါ့။
အခြေခံဥပဒေပြင်ချင်ရင် စစ်တပ်သဘောတူတဲ့ ” မသန်မစွမ်း” ကို ” မသန်စွမ်း” လို့ ပြင်သလိုမျိုး (အနှစ်တထောင် ချော့မြူရေးပလန်)နဲ့ တဖြည်းဖြည်းပြင်ရင်း စစ်တပ်အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျတာ သည်းခံပြီး စစ်တပ်လုပ်သမျှ ခေါင်းခံပေးရမယ်လို့ သောက်တလွဲ လက်ချာရိုက်ခဲ့သူတွေချည်းပဲ
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဟာ အောင်မြင်ဖို့ (မလွယ်ဘူး)
လက်နက်မဲ့တော်လှန်ရေးဟာ အောင်မြင်ဖို့ (မရှိဘူး)
ကျော်ဝင်းတို့က လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး မအောင်မြင်တာကို ဗကပ ကို ထုတ်ပြတယ်။ ဗကပက ဖြစ်လာတဲ့ “ဝ” ကို ဖုံးကွယ် တယ်
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အောင်မြင်သလား။ အနှစ် ၆၀ တွေ ဘာညာတွေ အခြားမကြည့်နဲ့ …. မနေ့တနေ့ကပေါ်လာတဲ့ AA ကို ကြည့်။ အောင်မြင်တာ မအောင်တာ သီအိုရီနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ လက်နက်ကို ကိုယ်ဘယ်လောက် အသုံးကျအောင် လုပ်နိုင်သလဲ ဆိုတာနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးရှိလို့ ကေအိုင်အေရှိတာ။ ကေအန်ယူရှိတာ။ မရှိခဲ့ရင် ခုချိန်မှာ မအလလုပ်သမျှ လက်ဗလာနဲ့ ခံဖို့ပဲရှိတယ်
2021-08-08 at 9:57 AM
အံသြတယ်နော် သူများတိုင်းပြည်တွေ ပြောင်းရာရှိပြောင်း တိုးတက်စရာရှိတိုးတက်နေချိန်မှာ တိုင်းပြည်ကို နည်းနည်းမှ ငဲ့မကြည့်သူတွေလက်ထဲ နှစ်အကြာကြီး ခေါင်းငုံနေခဲ့ရတာ
2021-08-08 at 9:58 AM
2021-08-08 at 11:21 AM
Kaung Kyaw says:
2021-08-08 at 1:19 PM
2021-08-08 at 3:41 PM
Thank you so much.We suoport and. stand with NUG.
2021-08-08 at 7:04 PM
2021-08-09 at 6:18 AM
We stand NUG
2021-08-09 at 4:12 PM
We have power that we only recognize NUG as people government and people dream that we must go together Federal Democracy like USA Democracy system.
Omar Rai says:
2021-08-10 at 6:47 AM
U Win Tin says:
2021-08-10 at 1:55 PM
Pay Thee says:
2021-08-11 at 11:26 PM
သမ္မတ ကြီး ကျန်းမာ ပါစေ
2021-08-12 at 11:47 AM
အျဖူ ေရာင္ says:
2021-08-17 at 8:11 PM
(၃၃) နှစ်ပြည့် (၈၈၈၈) အရေးတော်ပုံအခမ်းအနားများသို့ ပေးပို့သော အမျိုးသားညီညွတ်ရေး…
ဒီနေ့ဟာ အာဏာရူးတစ်စု ပြည်သူ့အာဏာကို လုယူထားတာ (၁၈၈) ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။…